madaxweyne farmaajo oo fadeexad kala kulmey qorshe uu donaayay inuu ku dhabar-jabiyo somaliland iyo dalalka igad oo dhabarka ujeediyay
Thursday August, 16 2018 - 02:18:57
Wednesday January 31, 2018 - 13:48:38 in by salman abdi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ayaa u muuqda inuu waayay kalsoonida dalalka IGAD oo uu kulamo kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kuwaas oo uu ka codsaday inay codka siiyaan murashaxa uu watay.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliya Mr. Axmed Cawad ayaa cadeeyay in dawladda Somaliya ay dedaal u gashay sidii ay ugu guulaysan lahayd kursiga xoghayaha guud ee IGAD. Wasiir Cawad ayaa sheegay in dawladda Somaliya ay kursigaas u sharaxday Dr. Cabdisalaan Hadliye oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland, kaas oo mar noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dawladii Xasan Sheekh Maxamuud.
Hase yeeshee warar xogogaala oo uu Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay in Mr. Farmaajo uu caqabada koowaad kala kulmay dawlada Uganda oo awood ku leh dalalka bariga Afrika oo iyaduna doonaysa inay qabato xoghayaha guud ee ururka IGAD oo uu wakhtigan hayo Mr. Maxbuub Macalin oo u dhashay dalka Kenya.
Waxa kale oo Farmaajo soo waajahay caqabad labaad oo ah dayn uu ururka IGAD ku leeyahay Soomaaliya oo gaadhaysa hal milyan oo dollar, iyadoo ay dawladda Uganda dhammaan bixisay daymihii uu ururka IGAD ku lahaa.
Farmaajo oo shalay Muqdisho ku laabtay ayaa inkastoo aanu arrintan saxaafadda kala hadlin, haddana wuxuu u muuqday nin ka soo quustay doonista kursigaas, waxaanay u dhowdahay in dawladda Uganda oo awood ku leh dalalka bariga Afrika islamarkaana ku jirta dalalka ay ciidamadu ka joogaan Somaliya ay kursigaas ku guulaysato.
Inkastoo ururka IGAD hawlihiisu u badanyihiin kuwo farsamo oo u badan abaaraha oo aanu u badnayn arrimaha siyaasadda gobalka, haddna dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in Mr. Farmaajo uu sharaxaadda Dr. Hadliye ee qabashada xoghayaha IGAD ka leeyahay ujeedo siyaasadeed oo ka dhan ah Somaliland.
Galka Baadhista:-Qalbi Dhagax Oo La Qorsheeyey In La Dilo Iyo Cida Qorsheysay.